Bathembisa ukugcoba owabo abamelene neSilo uMisuzulu - Ilanga News
Home Izindaba Bathembisa ukugcoba owabo abamelene neSilo uMisuzulu
Bathembisa ukugcoba owabo abamelene neSilo uMisuzulu
Okhulumela iNgonyama uMisuzulu uthi kabazi lutho ngalokhu
UMNTWANA Mbonisi Zulu uthi akusensuku zatshwala kubekwe isilo esisha kanti bahlela ukuba kuqalwe ngemisebenzi ethile, okubalwa kuyona owokukhuphula uMdlokombana.
UTHEMBISA ukuthi bazoqhubeka nokuvikela isithunzi seNdlunkulu kaZulu uMntwana waseKhwezi, uMbonisi Zulu ongumfowabo weSilo uZwelithini kaBhekuzulu, uMdlokombana okhiphe isitatimende esiveza ukuthi ziyavuthwa izinhlelo “zokugcotshwa kwesilo” wathi zonke izindlu zasendlunkulu zahlangana eBhekuzulu College, KwaNongoma mhla ka-6 kwephezulu, zavumelana ngegama lokumele aqhwakele kwesobukhosi. Kodwa okhulumela iSilo uMisuzulu uMntwana uThulani Zulu uthe kabazi lutho ngalo mhlangano. Kulesi sitatimende, uMntwana uMbonisi uthi ngaphambi kokuthi iSilo sibekwe, kuzoba nemicimbi emithathu okufanele yenziwe njengokosiko.
Ethintwa yiLANGA, ukuqinisekisile okushiwo yisitatimende, uthe impela siphuma kuye. Uthe kule micimbi ezokwenzeka, kubalwa nowokukhuphula uMdlokombana bemhlanganisa namathongo, bemnxusa futhi ukuba abe yingelosi enhle ezolusa isizwe sikayise ngokomoya. “Yize singakafinyeleli esivumelwaneni ngosuku lomcimbi, kodwa besifuna wenzeke ngaphambi komhla ka-12 kuNdasa (March), okuwusuku iNgonyama eyakhothama ngalo. Ngalo lolu suku, sizokwenza umcimbi wokuhlanza izigodlo ukulungiselela lowo ozongena esihlalweni njengenqubo yasendlunkulu uma kushone isilo. Isilo esisha sisuke singeke sikwazi ukungena esihlalweni izigodlo zingakahlanzwa. Ukuhlanzwa kwazo kuhambisana nokuhlanzwa kwesihlalo esisuke sesizoqhwakela lowo ozoba yingonyama,” kusho uMntwana Mbonisi.
Uthi emuva kwale micimbi, bazongena kowokwethula ingonyama emuva kokuba bekhulume nabo bonke abathintekayo, kubalwa nezindlu zasendlunkulu. Isitatimende kasilidalulanga igama lozothatha isikhundla “Igama lozothatha isihlalo livunywe yizo zonke izindlu endlunkulu kwalandela usiko lwesiZulu olwabekwa yiSilo uZwelithini kaBhekuzulu nezethulo azenza kwiNhlapho Commission. “INgonyama kule khomishini yakuveza ukuthi ngobani okumele bakhethe isilo, ngakhoke kumele kuvezwe emphakathini ukuthi yiziphi lezi zindlu ezagunyazwa, kwanqunywa nesigodlo lapho ingonyama izovela khona. Indlunkulu kaZulu izibophezele ekuqedeni ukungaboni ngasolinye okuqhubekayo, okubhebhezelwa ngabantu bangaphandle, abazimisele ngokuyixova ngezinhloso zabo zobugovu.
“Siyindlunkulu, sizoqhubeka nokubumbana njengomndeni futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuvikela isithunzi sendlunkulu. Laba bantu baxova indlunkulu nje bayehluleka wukulawula imindeni yabo kodwa bamatasa bafaka amakhala abo ezindabeni ezibekelwe indlu nkulu kuphela. Siyindlunkulu sizoqhubeka nokubumbana njengomndeni futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuvikela isithunzi sendlunkulu,” kusho uMnu Mbonisi.
UMntwana uThulani uthi yize esibonile lesi sitatimende, kodwa akukho angakuphawula ngaso ngoba ubengeyona ingxenye yomhlangano. “Indlu yaKwaKhangela (yoMntanenkosi Mantfombi, uMaDlamini) ibingeyona ingxenye yomhlangano, uNdlunkulu Gwabini (onguNdlunkulu kayise weSilo uZwelithini) noNdlunkulu uMantombela (naye ongunina weSilo uZwelithini) noMntwana waKwaFihlinqindi (uMntwana uPhilemon) nabo bebengeyona ingxenye yomhlangano kodwa akukho okutheni engingakuphawula ngalesi sitatimende ngaphandle kokuthi kangisazi, bengingeyona ingxenye yabebehlangene,” kusho uMntwana uThulani.
Previous articleInkampani yaseChina isolwa ngokushaya abakuleli ngesithende
Next articleUthole ukugxekwa uBaxter